Tag - လူသစ်များ
07.05.2018 07:08 ရောင်းဝယ်ရန် သင်ယူလေ့လာခြင်း: လူသစ်များအတွက် လမ်းညွှန်
FBSမှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး၊ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိဖြစ်နေပါသလား? ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေသင်ယူရမလဲလို့ စူးစမ်းနေပါသလား?
10.09.2018 10:35 မိန်းမပျိုနှင့် Forex. အဆင့် ၃
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်မရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ခုထိစိတ်ဝင်စားနေသေးတာ မြင်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်! ဒီဇာတ်လမ်းအစကို မသိသေးဘူးဆိုရင်၊ ပထမ နှင့် ဒုတိယ ပိုင်းကို ဒီမှာဖတ်ပါ။ စမ်းသပ်ချက် အခြေအနေများ: FBS သုံးသပ်သူများထံမှ အကူညီမတောင်းပဲ ကျွန်မဘာသာရောင်းဝယ်ရန်…
forex ကုနျသှယျ ပညာရေး လူသစ်များ forex ပညာပေးသင်ကြားရေး